Wasiirka arimaha gudaha oo Ahlu suna ugu baaqay ka qeybgalka maamulka cusub – Radio Muqdisho
Wasiirka arimaha gudaha oo Ahlu suna ugu baaqay ka qeybgalka maamulka cusub
Shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho wasiirka arrimaaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen “Odawaa” ayuu uga hadlay natiijada doorashadii madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ee shalay ka dhacday magaalada Cadaado halkaasi oo guusha ay ku raacday Cabdi kariin Xuseen Guuleed.
Wasiirka oo isaga iyo xubno kale oo dowladda ka tirsan ay si weyn uga qayb qaateen dhismaha maamulka Galmudug goob joogna ka ahaa doorashadii shalay ayaa waxaa uu sheegay in lagu guuleystay in si wanaagsan uu ku dhismo maamulkaasi waxaana uu u mahad naqay cid kasta oo ka qayb qaadatay habsami u socodka dhismaha maamulka Galmudug.
“Waxaa amaan mudan maamulka Ximan iyo Xeeb waxaa amaan mudan golihii wasiirada ee shaqadaas tirada badan qabtay juhdigaas ku bixiyay waxaan rabaa in aan xasuusiyo bulshada Soomaaliyeed boroseeskani waxaa uu socday 80 maalin 60 ka mid ah halkaan aan joogay waxaan rabaa in aan magaca ummadda Soomaaliyeed ugu mahad celiyo cid alaale iyo cidii nagala qayb qaadatay hirgalinta shirkaas “ayuu yiri Odawaa .
Wasiirka ayaa waxaa u mar kale ku celiyay baaq uu u jeediyay maamulka Ahlu sunna waljamaaca oo uu ugu yeeray in ay qayb ka noqdaan maamulka ay yeesheen gobolada Mudug iyo Galgaduud waxay tabanayaana wada hadal lagu xalinayo.
“Ahlu sunna waxaan mar walba ugu baaqeynaa in ay dadkooda iyo dalkooda dhexda uga jiraan walaalahood wax la qaybsadaan waxbaa loo ogolyahay waa dhamaaday waqtigii koox laga ogolaa wadankaan dadku waa in ay dowlad nimada dhexda ka galaan wixii dee xaquuq ah ay leeyihiin halkaas ka raadsadaan “ayuu yiri Odawaa.
Kaalinta saxaafadda ay ku leedahay kor u qaadida caafimaadka hooyada iyo dhallaanka-Sawirro